59 – Flash Photography ဓါတ်ပုံပညာရပ်ဆိုင်ရာ မှတ်စု ( ၅၉)
Flash Photography အကြောင်း တစ် စေ့ တစ်စောင်း ။
( A brief note on Flash Photography )
ကျွန်တော် ရေးခဲ့သည့် မှတ်စုများ တွင် နည်း ပညာ ပိုင်း ဆိုင်ရာ အတော်များများ ရေးပြီး စေကာမူ ဓါတ်ပုံ တွင် အရေးပါသည့် Flash Photography အကြောင်း ကိုမူ မရေးဖြစ်ခဲ့ပါ။ ကိုယ် ကိုယ် ၌ ကလည်း Flash ဖြင့် အရိုက် နည်းသည်လည်း ပါ ပါသည်။
Nikon Center မှ ရရှိထားသည် Flash ဆိုင်ရာ နည်း ပညာ စာ အုပ် ကို လေ့ လာ ကြည့်ရာ တွင် မူလ က Flash ဖွင့်ပြီး ရိုက် ရင်ပြီးတာဘဲ ဆိုသည့် အထင် နှင့် တက်တက် စင် လွဲ နေသည့် ပညာ ရပ် တစ်ခု ဖြစ် နေသည် ကို တွေ့ ရှိရပါသည်။ လွယ် မယောင် နဲ့ အတော် ခက်ခဲ လေး နက် သည် အလင်း ဆိုင်ရာ ပညာ ရပ် တစ်ရပ် ဖြစ်သည်ကို တွေ့ ရပါသည်။
မိတ်ဆွ တစ်ဦးကလည်း 2nd Curtain Sync အကြောင်းကို ရေး ရန် တိုက်တွန်းခဲ့ ပါသည်။ သို့ သော် လည်း အကြောင်းကြောင်း ကြောင့် မရေး ဖြစ်ပါ။ ယခု မှသာ လျှင် အဆိုပါအကြောင်းကို ရေး ဖြစ်ခဲ့ ပါသည်။
ယခု မှတ်စု ကိုရေးသားရာ တွင် Photo Video Magazine တွင် အမြင့်တန်း ဓါတ်ပုံ ပညာ ရှင် နှင့် ဓါတ်ပုံ ဆောင်းပါးရှင် John Cosgrove ရေးသားထားသည့် Flash Photography နှင့် Richard Schneider ရေးသားထားသည့် Falsh Photography ဆောင်းပါး နှစ်ခု ကို အခြေပြု ဘာသာပြန် ကာ ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
John Cosgrove က Flash Photography သည် အလွန် နက်နဲ ရှုပ်ထွေး သည့် Angle, Set of Light, စသည့် နည်းနာ နိဿယ များဖြင့် ဆောင်ရွက်ရသဖြင့် Expert များ သာ ဆောင်ရွက် သည့် ပညာ ရပ် ဖြစ်သည် ဟု ၄င်း၏ဆောင်းပါး တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
ယခု မှတ်စု တွင်မူ ကျွန်တော် ခြေနိုင် လက်နိုင် Flash ၏ သဘာဝ နှင့် အခြေခံ လုပ်ငန်းဆောင်တာ မျှကိုသာ ဖေါ်ပြ ပါမည်။ အချို့ အပိုင်း များ ကို ဘာသာပြန်ရာ တွင် မူလ ဆိုလိုရင်း သဘောမှ အတန်ငယ် သွေဖယ် သွားနိုင်သဖြင့် မူရင်း အင်္ဂလိပ် ဘာသာ ဖြင့်ပင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
ပုံ များ အနက် အချို့ သော ပုံများ မှာ စာ အုပ် များမှ ကူးယူ ထားသည့်ပုံ များ ဖြစ်ပါသဖြင့် မူလ အရည် အသွေး ထက် များစွာ လျှော့ ကျ လျှက် ရှိကြောင်း ဖေါ်ပြ အပ်ပါသည်။
အထက်ပါပုံ (၁) တွင် သာမန် ရိုက်နေကျ Normal First Curtain Firing Mode ၌ Falsh အနေနှင့် ယင်း၏ Firing Sequence ကို ဆောင်ရွက် ရန် ကင်မရာ က Flash အား အမိန့် ပေးသည်။
အထက်ပါပုံ (၂) ၌ E-TTL ( Evaluative Through the Lens ) Function တွင် Flash သည် Exposure ကို စိစစ် ရန် Pre-Flash ကို ကနဦး ထုတ်လွှတ်သည်။ ဤ လုပ်ဆောင် ချက်သည် Shutter တံခါး ပထမအချပ် စပွင့် သည်နှင့် 1/10000 Sec. အတွင်း ဆောင်ရွက် လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
2nd or Rear or Slow Curtain Synchronization Mode တွင် မူ အထက်ပါ ပုံ (၄) အတိုင်း Shutter ပွင့်ပြီးသော်လည်း Flash ကမပွင့် ဘဲ Shutter တံခါး စတင် ပိတ် မှ Flash ၏ Firing Sequence ကိုစတင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်း ကို Second Curtain Synchronization ဟုလည်း ခေါ်သည်။
Flash သည် Pre Flash ထုတ်လွှတ် ကာ ကင်မရာ အား Exposure ကို တွက်ချက် စေသည် ဆိုစေကာမူ နှစ်မီတာ အထက် ရှိ နံရံ ကို တစ်ဆင့် ရိုက်ကာ ပြန်လာသည့် Bounce Flash နှင့် ၊ Subject နှင့်ကင်မရာ များစွာ ဝေးကွာ နေသည့် အခြေအနေ များ တွင်မူ ကင်မရာ Light Meter Sensor သည် Exposure ကို မှန်ကန်စွာ တွက်ချက် နိုင်စွမ်း မရှိပါ။
အလင်း အားကို လုံး ၀ အထိန်း အချုပ်မရှိဘဲ အကုန် လွတ်လိုက်သည့် Mode ဖြစ်သည်။
Flash မှ အလင်းကို လို အပ် သလို ထိန်းကာ လွတ် ပေးသည့် Mode ဖြစ်သည်။ အလင်း ပြင်း အားကို Full, Half, Quarter, Eighth, 16th, 32nd, 64th or 128th စသည် ဖြင့် လိုအပ်သကဲ့သို့ ထိန်း၍ လွတ်ပေး နိုင်သည်။ Creative Photography, Higher speed and Tele Photo ကဲ့သို့ ရိုက်ကူး သည့် နေရာ တွင် အသုံး များသည့် Mode ဖြစ်သည်။
Film camera ခေတ်တွင် Through the Lens (TTL) သုံးခဲ့သော် လည်း Digital ခေတ်တွင်မူ Evaluative Through the Lens ( ETTL ) Mode ကို သုံးလာသည်။ အလင်းရောင် မျှတ ကောင်းမွန် သည် ပုံ ဖြစ်လာစေရန် Flash Power, ISO Rating, Lens Length, Aperture Selected and Ambient Light စသည့် အားလုံးသော အချက် များကို Pre-flash ဖြင့် Subject မှ Bounce ပြန်လာသည့် Data များ အရ တွက်ချက်ကာ Light ကို ထုတ်လွတ်သည့် စနစ် ဖြစ်သည်။ သိမ်မွေ့သည့် Subtle Lighting နှင့် Fill-in Flash များတွင် များစွာ ထိရောက်သည့် Mode ဖြစ်သည်။
Flash ကို အကြိမ်များစွာ ဖွင့်သည့် Stroboscopic Effect ပေးသည့် Mode ဖြစ်သည်။ အောကပါပုံ ကဲ့သို့ အမှောင်ထဲ ရှိ Subject ကို Creative Photography အဖြစ်ရိုက် ရာ တွင် သုံးလေ့ရှိသည်။
အခြား တစ်ချက်မှာ Red-eye-effect ဖြစ်သည်။ Flash နှင့် Lens များစွာ နီးကပ်နေသည့် ကင်မရာ များတွင် ဖြစ် လေ့ ရှိသည်။ Flash ၏ အလင်းရောင်သည် မျက်လုံး အတွင်းရှိ သူငယ် အိမ် Retina ကို ရိုက်ခတ် ရာတွင် သွေးကြော အမျှင် ကလေး များ ( Blood Vessels ) မှ အနီရောင် သည် Sensor သို့ ရောက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ အချို့ သော ကင်မရာ များတွင် Red-eye-reduction ပါသော်လည်း အကာင်း ဆုံးနည်းမှာ မူ Flash ကို ကင်မရာ မှ ခွာ လိုက် ခြင်း သည် အထိရောက် ဆုံး ဖြစ်သည်။
Falsh ကို ဖွင့် လိုက်သည်နှင့် ကင်မရာ သည် အမြင့်ဆုံး သုံး နိုင်မည့် Shutter Speed ( Predetermined X-Sync) ကို ပေး လိုက်သည်။ ခေတ်ဟောင်း ကင်မရာ များ၏ Predetermined X-Sync မှာ 1/60 Sec ဖြစ်သည်။ နောက် ပေါ် Pro Level ကင်မရာ များ တွင် မူ Flash Predetermined X-Sync သည် 1/250 Sec., 1/500 Sec. စသည်ဖြင့် ရှိကြသည်။ အချို့ သော Pro Level DSLR ကင်မရာ များ သည် High Speed Sync Flash Mode ဖြစ်သည့် FP ( Focal Plane ) ကိုသုံးကြသည်။
Flash ၏ အဓိက Mode နှစ်ခု မှာ -
Front Curtain Sync Flash သည် Normal Flash Mode ဖြစ်သည်။ Shutter စ ပွင့် သည်နှင့် Flash အလင်းစလွတ်သည့် စနစ် ဖြစ်သည်။ Flash သည် အားလုံးသော လှုပ်ရှား မှု များကို Freeze လုပ် လိုက်သည်။ Slow Shutter ဖြင့် ရိုက်ပါလျှင်မူ Flash မီးပွင့် ပြီး သော်လည်း Shutter က ဆက်ပွင့် နေသည့်အတွက် လှုပ် ရှားနေသည့် အရာ များ ၀ါးနေမည် ဖြစ်သည်။
Front Curtain Sync Flash 1/200 Sec. ဖြင့် ရိုက်ထားသည့် ပုံ။
ယင်းကိုပင် Slow Shutter Speed ဖြစ်သော 1/20 Sec ဖြင့် ရိုက်ပါက အောက် ပါအတိုင်း တွေ့ ရပါမည်။
အဆိုပါ ပုံ ကိုပင် 2nd Curtain Sync ဖြင့် ရိုက်ပါ မူ အောက် ပါအတိုင်း မြင်ရပါမည်။
Second Curtain Sync Flash ၏ Flash Firing Sequence သည် Shutter ပွင့် သေည်လည်း Falsh မပွင့် သေးဘဲ ဒုတိယ ပိုင်း Shutter ပြန် မပိတ် မှီကလေး တွင်မှ Flash ဖွင့် ပေး လိုက်သည့် နည်း ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ကျ မှ Falsh ပွင့် သည့် နည်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ ကြောင့် Slow or Rear Sync Flash ဟု ခေါ် ကြပါ သည်။
စသည့် အစဉ် အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
အချုပ် အားဖြင့် Shutter ပွင့်သည် နှင့် မီး ပွင့် သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
သို့ရာ တွင် 2nd Second Curtain Sync (also sometimes called Slow Synch) Flash Firing Sequence မှာ မူ -
2nd Curtain Sync ဖြင့် ရိုက် ထားသည့်ပုံ။
Second Curtain Sync Flash သုံး ရာ တွင် မည်သည့် အချိန် တွင် Flash ပွင့် မည်ကို အတိအကျ ထိန်းချုပ် ၍ မရ ခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ တစ်ခါ တစ်ရံ Flash ပွင့် ချိန် တွင် Subject သည် Frame အပြင် သို့ ရောက်သွားသည့် အဖြစ်မျိုး နှင့်လည်း ကြုံ ရ တတ်သည်။ ထို့ ကြောင့် Second Curtain Sync Flash ရိုက် ရာ တွင် အလေ့ အကျင့် ရှိထားရန် လိုသည်။ တစ်ခါ တစ်ရံ တွင်လည်း ကံ အားလျှော်စွာ ကြက်ကန်း ဆန်အိုး တိုး သည့် အဖြစ်မျိုး နှင့်လည်း ကြုံ နိုင်ပါသည်။
အချုပ် အားဖြင့် ဆိုရပါလျှင် Flash Photography သည် အလွန် ကျယ်ပြန့် သည့် ဘာသာရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ယခု မှတ်စု မှာ Falsh Photography ၏ ခြေဆင်း ကလေး မျှ လောက်သာ ဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြ အပ်ပါသည်။
Posted by Soe Hlaing at 08:03
59 – Flash Photography ဓါတ်ပ...